Caddaalad Xumida Doorashada Deegaanka Soomaalida – Rasaasa News
Caddaalad Xumida Doorashada Deegaanka Soomaalida
Caddaalad Xumida Doorashada Deegaanka Soomaalida Caddaalad darada dhanka Tirada dadka ah iyo natiijooyinka doorashada Kililka ee baarlamaanka heer Kilil iyo heer Federaal waxey ku xasuusinayaan dulmiga ka jira gobolka. Waxaan maanta qormadeydan idiinku soo bandhigayaa qaabka cadaalad darida ka fog ee loola dhaqmey beelo kamid ah kuwa deegaanka iyo isa saarka magaalooyinka qaar meesha qaarkale la bulaaliyey.
Sidaan xogta ku hayno Baarlamaanka deegaanka waxaa kusoo baxa xubno dhan 186 xubnood meesha heerka Federaal ay kusoo baxaan 23 Xubin oo ka yar inta qoomiyadda Soomaalidu ay xaq u leedahay marka la eego tirada qawmiyaddeena Soomaalida ee dalka Ethiopia. Tartanka iyo hardanka Ethiopia u dhaxeeya ee sadbursiga Kililkeenu aadbuu uga hooseeyaa waxaan dhacdey intii ay waxooda kor u raadsan lahaayeen waxey ku mashquuleen iney iyagu lugaha is jaraan oo ninkii badnaana la yareeyo midkii yaraana la isku dayo in tiradiisa la bulaaliyo.
Dr Cabdi Majiid Xuseen illaahay u naxariistee waxuu deegaanka Soomaalida uga tagay raad caddaalad xumo ah oo beelaha qaarkood dhulka la galay kadib markii siyaasaddii xiligaas jirtey ay ku heshiin waayeen raggii ay is hayeen. Dhibwalba oo shacabka ku dhaca ama caddaalad daro ah waxaa loo eersan karaa ururada dagaalama ee ka doortey iney qoriga qaataan duurkana u baxaan xilli siyaasadda Ethiopia ay ahayd mid Caboon fursado badanna ay muuqdeen. Dr Cabdimajiid waxaa laga hayaa inuu ku dhaartey in beesha Ogaadeen uu waddanka Ethiopia kaga dhigo doono mid Tiro yar kana yar Soomaalida inteeda kale. Si taas loo hirgaliyo Abdimajiid waxuu doorashadii labaad ee waddanka Ethiopia hirhaliyey in bulshada Soomaalida Ethiopia loo qaybiyo labo qaybood: Ogaadeen iyo Non Ogaadeen isla markaana labadooda la isu tuso iney cadaw isku yihiin.
Si fursaddaas Cabdimajiid ugu hirgasho waxuu dib u habeyn kusameeyey qaabka doorashada loogu soo baxo waxuuna Soomaalida aan kasoo jeedin beesha Ogaadeen uu magaalooyinkooda oo dhan siiyay sadbursi dheeri ah waxaadna arkeysaa in gobol 6 dagmo ama 4 dagmo ah ay kasoo baxaan hal nin oo heer Federal ah meesha magaalo kaligeed oo ay dagaan beelaha kale ee Soomaalidu ay helaan kuraas ka badan kuwaas. Haddaan milicsano Shaxda doorashada deegaanka ee u danbeysey aan eegno qaab goboleed taasoo aan ka dheehan kareyno qaabka raadkii Cabdimajiid qabiilada qaar dhulka u dhigey qaarna kor ugu qaadey
Dhagaxbuur (4 Federal)
Gobolka Liibaan(1 Federal)
Gobolka Shiniile(4 federal)
Gobolka Jijiga (5 Federal)
Shaxdan sare waxaa ka muuqda caddaalad daro aad u weyn oo ay caddahay cidda ay ka dhan tahay. Tusaale ahaan gobolka Fiiq Waxaa weeye 6 dagmo waxaana kasoo baxay lixdaas dagmo 1 Ruux oo heer Federaal ah iyadoo dhamaan dagmooyinka Fiiq magaala walba laga soo doorto saddex xubin oo heer Kilil meesha magaalooyinka kale qaarkood ay kasoo baxaan tiro intaas ka badan. Gobolka Qoraxey waa Afar Dagmo waxaana heer Federaal u aada Dr Sarhaye Xiddig oo kaliya. Gobolada qaar oo loo maleeyey in beelo kala duwan daggaan waxaa lagu sameeyey dheeli tir sida ka muuqata gobolka Godey oo Gorfe Gaarane lagu dheeli tiray qofka kale ee Godey kasoo baxay. Sidoo kale Gobolka Dhagaxbuur iyo Wardheerna waxaa la bulaaliyey dagmooyinka kale ee ay dagaan beelaha aan Ogaadeenka ahayn.
Gobolada Qaar oo loo maleeyey in beesha Ogaadeen kaliya dagto waxaa iyaga loola dhaqmey si aad u hooseysa. Tusaale ahaan gobolka Qoraxey waxaa kasoo baxa 1 Nin meesha gobolka Fiiqna uu kasoo baxo 1 nin oo heer Federaal ah.
Amakaagga iyo caddaalad darada ka muuqata Qaabka Kililka waxaad arkeysaa in Dagmada Awbarre ay kaligeed nin heer Federaal ah iyo waliba 6 heer Kilil ah ay dirsadeen. Meesha magaalada Godey ay iyadu heshey 4 ruux oo heer Kilil ah. Caqliga saliimka ah way ka weyn tahay caddaalad darida ka jirta Kililka in Awbarre ay 6 ruux hee Kilil ku darsato meesha Godey ay tahay 4, Qabridahare, 4 Dhagaxbuur 4, Wardheer 4, Fiiqna 3.
Awbarre kaliya ma ahan magaalooyinka tiradooda la buunbiiniyay si fikirkii Dr Cabdi majiid loo hirgaliyo waxaana sidoo kale caddaalad darida noocan ah waxeyna sii kordhineysaa caddaalad xumida ka jirta deegaanka ee u baahan in lasaxo. Sidoo kale dagmada Qabribayax oo ah meeshii Dr Abdimajiid kasoo bixi jirey ayaa waxaa laga soo doortaa 6 ruux oo heer Kilil ah waxayna siyaasaddan lagu hawlgalo ee deegaanku na bareysaa in Qabribayax ay aad uga weyn tahay dhamaan magaalooyinka Kililka ee ay kamid yihiin Dhagaxbuur, Wardheer, Qabridahare, Godey, Fiiq. Tirakoobkii lagu saleeyey doorashooyinka Kililka ayaa kusaleysan in Dagmada Awbare, , Mooyaale, Qabribayax iyo Shiniile ay yihiin magaalooyinka dalka ugu tirada badan kuwaasoo xaq loogu siiyey iney helaan 6 xubnood iyo 5 xubnood oo heer Kilil ah.
Ujeeddada buunbuuninta tirooyinka magaalooyinka qaar ayaa salka ku heysey rabitaankii Dr Abdimajiid ee ahaa in beesha Ogaadeen maaddaama oo labadii urur ee mataleysay doorteen dagaal la eedsiiyo isla markaana nadaamka dawliga lagu yareeyo taasoo ah maanta midda lagu qaybsado saadka iyo miisaaniyadda Kililka.
Haddaba arintan oo muddo soo noqnoqatey waxaa lagama maarmaan ah in dib loo saxo dulmiga aan saxda ahayn ee deegaanku ku hawlgalo. Si arintaas loo saxana waxaa loo baahan yahay:
1- In tira koob sax ah oo deegaanka oo dhan ka hirgala la sameeyo taasoo lagu saleyn doono tirada dagmooyinka.
2- In Kililku u dhaqaaqo iney raadsadaan xaqooda kaga maqan Ethiopia marla la eego dhanka Baarlamaanka Federaalka .
Haddii Kililku kusii dhaqmo siyaasaddan guracan ee beelaha qaar goobaneysa waxaa cad in caddaalad xumidani ay horseedi karto aargoosi iyo siyaasad mandhaleys oo bulshada walaalaha ah dhexmarta taasoo ah waxaan loo baahnayn.
Ugu danbeyn way caddahay in Awbarre, iyo Qabribayax aysan tiro ay ka badan yihiin aysan ku helin baarlamaanka iyo kuraasta dheeriga iyadoo aysan ujeedku ahayn in iyaga wax laga qaado, balse ay tahay in magaalooyinka kalena lasiiyo tirada saxda ah ee ay xaqa u leeyihiin.
Al-Haji waa qoraa madaxbanaan kana faalooda xaaladda deegaanka waxii qoraal kusaabsanna emailkayga sare igala soo xidhiidh.
The most respected man in the Somali State of Ethiopia has been sacked
Liya Kebede Blossoms as an Actress in “Desert Flower”